Cabdiraxmaan Cabdishakuur: Haddii ay ku kalsoon yihiin ammaanka garoonka, ayagana ciidanka ha iska dhigaan | Dhacdo
Cabdiraxmaan Cabdishakuur: Haddii ay ku kalsoon yihiin ammaanka garoonka, ayagana ciidanka ha iska dhigaan
Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir ayaa ka hadlay qorshaha xilligan ay Dowladda Federaalka ku joojisay hubkii lala geli jiray Garoonka Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho.
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir ayaa tallaabadaasi ku sheegay mid lagu xoojinayo culeyskii markii horeba, ay Dowladda Federaalka ku haysay Golaha Midowga Musharaxiinta.
“Waxaan u aragnaa inay tahay arrin wixii maalmahaan magaalada ka socday daba socda, oo ah in dadka siyaasiyiinta ama musharaxiinta xilka madaxtinimada u taagan lagu beegsanayo. Waad la socotaa maalin dhexdaas dowladdu ciidan bay xaafadaheena iyo xarumaheena kordhigtay, dhadhaqaaqa magaalada wuu adag yahay, kulamada siyaasadda lama qaban karo, tani-na waxay qayb ka tahay aan aaminsanahay in dhaqdhaqaaqeenii safarada iyo garoonka la xadido.” Ayuu yiri Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo la hadlay VOA ayaa yiri “Haddii dadka nabadgelyada noo qaabilsan inaga ee nala socda laga celiyo Garoonka Diyaaradaha, dadkii tartanka naga dhaxeeyayna Musharax Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka mid yahay iyo dadka kaloo la halmaalana ay ayaga u fasaxan yihiin, taas dee waxay u muuqataa inay tahay cadaalad darro iyo sinnaan la’aan.”
Waxa kaloo uu yiri “Haddii leesku halayn karo ammaanka Garoonka Diyaaradaha ayagana waa inay isku haleeyaan, sideedaba dadka masuuliyiinta ah ee xilka haya ayagaa la rabaa inay bilaabaan in nabadgelyada leesku halayn karo iyo in kale, cidda lagu daysanaayo waa ayaga. Haddii ayagu isku halayn karin nabadgelyada Garoonka Diyaaradaha oo la leeyahay intaasoo masuuliyiin ciidankooda hala galaan, inta kalana lama geli karaan, maxay tahay sababta Madaxda Dowladda aysan isugu halayn karin ammaanka garoonka, oo anaga naloogu khasbayaa inaan isugu halayno?”
Ina Warsame ayaa intaa ku daray “Ammaanka Garoonka Diyaaradaha waa in la yiraahdaa ciidan lalama wada geli karo, Madaxda Dowladana kuwa u tartamaya xilka iyo kuwa hadda xilka ka sii dhammaanayo ee tartanka qaybta ka ah waa inay ku wada kalsoonaadaan ciidanka amniga ee garoonka iyo qolada kale ee Amisom ee joogta, sinnaantaas anaga waan ogolnahay, laakiin qaarkiina ammaankiina idinka ilaashada, garoonkana lama geli kartaan ciidan, Madaxda Dowladana way la gelaysaa, macnaheedu waxaa waaye kuma kalsoona ammaanka garoonka. Haddii ammaanka garoonka ku kalsoon yihiin ayagana ha iska dhigaan ciidanka ay gudaha la gelayaan.”